Iimveliso zoMbane zoMbane weHlabathi kunye noMthengisi weSulution
Isikrini seConsole (6.2-10.1 intshi)
Isithuthi sokuhambisa servo-HEGY-138
I-ShangHai Harmonic Machinery Co, Ltd. ibekwe kwiDolophu yase Yuqi, emantla ntshona e "Pearl entle yeTaihu Lake", kwiimitha ezingama-600 ukusuka ekuphumeni kwe Yuqi kwindlela engu-9 yendlela ye-G42 Huning Expressway. Le nkampani iye yasekwa ngoMeyi 2012 kunye ikomkhulu ebhalisiweyo yuan million 60 kunye nendawo engaphezulu kwe 10000 square metres.
Ukuzimela ngokuzimeleyo kunye neNkonzo eNtsha
Inkampani ihlala ibambelela kuphuhliso lomgaqo "wokuzimela okuzimeleyo kunye nenkonzo yokuyila" ukubonelela abasebenzisi ngexabiso eliphezulu elisebenzayo.
I-odolo enkulu yaphesheya isayine kwakhona! HY ...
HENGYITONG OOMATSHINI Chinese phambili R & D, imveliso kunye nokuthengiswa kweemveliso ukuhanjiswa ngqo. Kubandakanywa izixhobo zokucoca iiplanethi ezichanekileyo, iiharmonic reducers, amaqonga ajikelezayo, ukujikeleza kwemoto ...
HENGYITONG Smart yokuthutha mqengqeleki Drive, S ...
Emva kokusasazeka kwe-COVID-19 corona-virus iya kulawulwa, inkqubo yokuhanjiswa kwempahla iya kwakhiwa kwakhona, umzi mveliso we-smart logistics oxhaswa ziitekhnoloji eziphezulu ezinje nge5G, ubukrelekrele bokufakelwa kunye nedatha enkulu ...